Internet ka buuxa codsiyada lacag la'aan ah oo ay bixisay in ay bixiyaan si ay xog ka mid phone wareejiyo kale. Qaar ka mid ah barnaamijyadooda runtii adkayn kartaa habka wuu baabbi'iyaa iyo waxa xaddi weyn oo internet (data) Kaalmada iyo sidoo. Waxaa lagu talinayaa in la doorto habka ugu fudud ee suurtogalka ah. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah dhibcood in ay caddayn karaan in ay waxtar halka wareejinta xogta ka mid qalab in kale.
Talooyinka users Blackberry ayaa qorsheyneysa in ay beddelaan oo ka mid qalab BB in kale
Blackberry ayaa Device app Switch wareejin karaan qaar ka mid ah files ka mid qalab si kale oo aan isku xira qalabka kombiyuutarka. Si kastaba ha ahaatee, Device app Switch iyo qaar ka mid ah barnaamijyadooda kale kuma wareejin karaan BlackBerry barnaamijyadooda, farriimo email, diiwaanka taleefan, Bookmarks browser, qaar audio- video files, iwm Sidaas, xira qalabka si PC waxay u muuqataa in ay doorasho ugu dhaqsiyaha badan oo ugu ammaanka badan si ay u gudbiyaan dhammaan noocyada kala duwan ee files.
Ka dib wareejinta entries taariikheed, info xiriir, iyo faylasha kale, qalab aad aan iyaga si degdeg ah lagu ogaan karaa. Tani waa caadi, oo waxay dhici kartaa mar kasta oo aad u gudbiyaan lacagta badan ee xogta ka mid qalab in kale. Just sugto dhowr daqiiqo, oo isku day mar kale raadinaya xogta walaacsan.
Mararka qaarkood, laga yaabo in aad in aanay awoodin in ay helaan xiriirada qaarkood qalabka cusub xitaa ka dib markii si buuxda u wareejinta xogta laga qalab jir. Ma jiro wax u werwero, laga yaabee, xiriirada aad ku kaydsan yihiin account internetka ku salaysan qaar ka mid ah. Faahfaahin Kuwaas oo si toos ah pop-up lahaa qalabka news aad mar aad saxiixdo-in dhammaan aad barnaamijyadooda email iyo fariimaha.
Waa kuwee waa habka ugu wanaagsan ee xogta ka mid qalab BlackBerry wareejiyo mid kale?
Waxaa jira siyaabo dhawr ah oo ay ka mid app Device Switch oo loo isticmaali karo in ay xogta ka mid qalab BlackBerry wareejiyo kale ah. Si kastaba ha ahaatee, soo baxa oo dhan, ikhtiyaarka ugu fiican waa inaad kala soo baxdo software desktop BlackBerry ee
Booqo website Blackberry ayaa, iyo soo bixi software ah.
Markaas, rakibi BB software desktop aad laptop ama PC.
Kadib markii uu dhamaystay nidaamka rakibo, xiriiriyaan qalab BlackBerry jir ah si aad u computer xadhig USB. Software waxay aqoonsan doonaa qalab aad iyo muujiyaan samaysay iyo moodeelka tirada dukaamada waaweyn ee shaashadda. Marka qalab aad la arki karo ee software-ka desktop Blackberry, guji "Back-up iyo Soo Celinta" icon. Markaas, guji "Back-up," oo xulo "Dhammaan xogta" doorasho si ay u abuuraan dib-up for xogta oo dhan ka dukaamada jir. Nidaamka abuuri doonaa dib-up for macluumaadka telefoonka aad kombuutarka daqiiqado yar gudahood. File ayaa ka walaacsan badbaadi lahaa sida file jiifka taariikhda.
Ka dib markii la abuurayo dib-up for telefoonka BlackBerry jir, ka saar telefoonka jir ah, oo ku xidhi aad dukaamada cusub BlackBerry in aad PC isticmaalaya xudunta isku USB. Hadda software BlackBerry lagu ogaan lahaa qalab cusub oo magaceeda ku interface software ee tuso. Mar kale, dooro "Back-up iyo Soo Celinta," oo xulo "Soo Celinta." Markaas, si fudud guji file dib-up in idinka abuuray telefoonka jir. Waa sidaas! Dhammaan xogta aad wareejin doonaa ka PC aad qalab cusub BlackBerry daqiiqado yar gudahood.
Tan ugu muhiimsan, waxaad abaabuli karaan iyo in la abuuro dib-up for fariimaha qoraalka ah, iyo taariikhda telefoonka iyo weliba. Blackberry badbaadiyay xogta aad ee BlackBerry Back-up folder in uu abuuray gudahood waraaqaha folder aad PC oo dhan.
Laga soo bilaabo waraaqaha, fariimaha qoraalka ah, xiriirada, si video iyo files audio, software desktop BlackBerry abuuraa dib-up ee dhamaan noocyada kala duwan ee files ka qalab BlackBerry aad.
Si ka mid dukaamada BB wareejin codsiyada kale, kaliya gasho dunida BlackBerry ka qalab cusub, oo ay isticmaalaan qalab la mid ah jirka ee user-id iyo password.
Waxaad booqan kartaa "My World" screen iyo dib u soo dajiyo Chine in la rakibo telefoonka jir. Hubi in aad qaadatid lacagta xogta internet ku filan halka dib-u-rakibidda barnaamijyadooda ku saabsan qalabka cusub.
Waa kuwee BlackBerry qalab aad u isticmaali?
Haa, xitaa xiligii ah iPhone 6 lagu daray, waxaa jira dhowr users oo weli door bidaan in ay isticmaalaan Blackberry, laga yaabee, ay sabab u tahay sifooyinka ammaanka iyo waayo-aragnimo guud. Qaar ka mid ah qalabka BlackBerry ugu caansan waa BlackBerry Classic, BlackBerry Passport, PlayBook, BlackBerry Z3, Q5 Blackberry, Q10, BlackBerry Z10, BlackBerry qalooca 9360, BlackBerry 9700 Geesi 2, iyo Blackberry Shuclada 9800.
Shirkadda ayaa dhawaan waxa ay ka dhigtay in headlines by dhawaaqay bilaabidda Tablet cusub oo lagu magacaabo SecuTablet. Warar ayaa sheegaya in IBM ayaa soo saartay xal software ganacsiga qaarkood loox oo waxan la filan oo xaqiijisatay in loo isticmaalo shaqada dawladda. Plus, waxa ay sidoo kale bixisaa barnaamijyadooda goobaha fariimaha iyo shabakadaha bulshada. Khubarada aaminsan yihiin in tani ay tahay BlackBerry isku dayga in la abuuro qalab badan loo loo isticmaali karo shaqo iyo madadaalo.
> Resource > Transfer > Sida loo xogta ka qalab BlackBerry wareejiyo BlackBerry kale